Donald Trump Oo Casuumaad Ka Helay Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi – somalilandtoday.com
Donald Trump Oo Casuumaad Ka Helay Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi
(SLT-Pyongyang)-Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong-un, ayaa warqad u diray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isagoo ka codsaday kulan daba socda kulankoodii hore ee taariikhiga ahaa, sida uu sheegay aqalka cad.
“Soo jeedintan aasaasiga ah ee lagu soo gudbiyay warqadda waxaa nalooga codsaday jadwaleynta kulan hor leh oo lala yeelanyo madaxweynaha, arrintaasoo aan annaguba sii qorsheyneynay” ayay tiri Ms Sanders.
Mr Moon ayaa aad ula dhacsanaa dhex dhexaadinta labada hogaamiye iyo kulankii ay ku yeesheen Singapore bishii Juun, waxaana la filayaa in isaga qudhiisa uu Mr Kim la kulmo isbuuca soo socda.
Warqadda ka timid Pyongyang ee gaartay aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka ayaa ku soo aaday maalin ka dib markii Yukiya Amano, oo ah madaxa guddiga la socodka Nukliyeerka ee Qaramada Midoobay uu sheegay in dhaqdhaqaaqyada Nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ay carqaladeeyeen qaraarkii Qaramada Midoobay ay ku mamnuucay Hubkaas.
Ms Sanders ayaa sidoo kale ammaantay dhoolla tuskii milatari ee ay dabayaaqada usbuuci la soo dhaafay sameysay Kuuriyada Waqooyi, iyadoo sheegtay in “markii dhinac laga eego uusan dhoolla tuska ku jirin hubka Nukliyeerka”. Waxay arrintaas ku tilmaantay iney ku timid “guusha ka soo hoyatay” dadaalkii uu bixiyay madaxweyne Trump.
Lahaanshaha sawirkaAFPImage captionMilateriga Kuuriyada waqooyi sooma bandhigin madaxyada Nukliyeerka
“Mahadsanid gudoomiye Kim. Labadeennuba waxaan caddeyn doonnaa inuu qof kasta khaldanyahay!”. Ayuu yiri Trump.
Wixii ka dambeeyay kulankii ay labadan hogaamiye ku yeesheen Singapore waxaa socday dadaallo lagu sii xoojinayay heshiiskii ay gaareen, in kastoo Piyongyang ay dhankeeda ka cabaneysay in aan sidii loo baahnaa looga dhabeynin sii amba qaadista heshiiska.